Pejy Manontolon’ny Gazety Iray An-toerana Miresaka Taratra Nokleary Nampisahotaka An’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2017 4:27 GMT
Ny pejy feno ao amin'ny Jilin Daily mitantara momba ny taratra nokleary.
Tamin'ny 6 desambra 2017, namoaka pejy iray manontolo mitantara ny fitaovam-piadiana nokleary sy ny fomba fiarovan-tena raha sendra taratra nokleary ny Jilin Daily. Nitarika ny maro, indrindra fa ireo mponin'i Shina avaratra hanontany izany raha fialohavana ny hetsika miaramila Amerikana manohitra ny andrana balafomanga ao Korea Avaratra ny tatitra an-gazety.
Miorina any avaratr'i Shina akaikin'i Korea Avaratra ny faritanin'i Jilin. Ny Jilin Daily dia sampan'ny governemanta ao an-toerana.
Ny 29 Novambra, nanao andrana tamin'ny balafomanga miampita kaontinanta mahavita mahatratra ny ampahany manontolo amin'ny taniben'i Etazonia i Korea Avaratra. Nampitandrina ny filoha Amerikana Donald Trump tany aloha fa hitondra “oran'afo sy fahatezerana” ao Korea Avaratra raha mbola manohy mandrahona ny fiarovana Amerikana ny mpitarika ny firenena Kim Jong Un. Shina, indrindra fa ny faritra avaratr'i Shina, no mety hiharan'ny “orana”.
Mandritra izany fotoana izany, nampiseho ny antontan-taratasy iray hafa navoakan'ny orinasan'ny finday Jilin ao Shina fa nametraka toera-pialokalofana dimy ao amin'ny faritanin'i Changbai, izay manana sisintany 260 kilometatra miaraka amin'i Korea Avaratra ny governemantan'i Jilin.
Nofafàna haingana tao amin'ny sehatry ny media sosialy ny adihevitry ny daholobe momba ny mety hisian'ny ady any Korea Avaratra. Na dia ny Global Times mifandray amin'ny antoko aza, tsy maintsy nanaisotra ny lahatsorany raha vao nivoaka an-tserasera (nalaina tamin'ny Voices of America):
Amin'izao fotoana izao, mihamafy ny fihenjanana ao amin'ny Saikinosy Koreana. Nandefa andrana nokleary enina i Korea Avaratra ary heverina fa efa manana baomba nokleary ny firenena. Ankoatra izay, nahatratra ny fara tampony ny teknolojiany fandefasana balafomanga tamin'ity taona ity ary nahomby tamin'ny fandefasana balafomanga izay mety hahatratra ny faritra rehetra ao amin'ny kontinanta Amerikana. Nivoady i Etazonia fa hanimba ny toekaren'i Korea Avaratra izy ary hampiasa ny tsindry ara-miaramila. Niakatra ambony dia ambony ny fanahiana isian'ny fifandonana ara-miaramila eo amin'i Etazonia sy i Korea Avaratra. Manana sisintany miaraka amin'i Korea Avaratra i Jilin, heverina ho fanehoan-kevitra amin'ny mety hisian'ny ady ao amin'ny saikinosy Koreana ny pejy iray manontolo mampiseho ny fepetra fisorohana ny taratra nokleary.
Na dia eo aza ny sivana, mitohy hatrany ao amin'ny tranonkala media sosialy Shinoa malaza, Weibo, ny lahatsoratra miahiahy amin'ny fifandonana ara-miaramila. Mpisera Weibo iray mino fa neken'ny governemanta foibe ny fampahalalam-baovao navoakan'ny Jilin Daily:
Tsy vazivazy ity. Mahafantatra ianareo rehetra fa tena henjana ny sivana atao amin'ny vaovao ao Shina. Ny karazana votoaty tahaka izany dia tsy maintsy ankatoavin'ireo manampahefana ambony alohan'ny hanaparitahana azy. Te hilaza zavatra aminao ireo mpitarika saingy tsy afaka milaza izany mazava. Ry namana ao Dongbei (avaratr'i Shina), jereo azafady ny masoivoho Amerikana ao Shenyang, raha miala izy ireo, dia mandosira.
Na dia niezaka ny hampihena ny mety hisian'ny ady aza ny fampahalalam-baovao avy amin'ny fanjakana, maro no mbola manahy mikasika ny taratra raha nanao hetsika miaramila hanoherana ireo toby nokleary Koreana Tavaratra ny Amerikana:
Na dia nipoaka teny an-danitra aza ny balafomanga nokleary, mbola ho tandindomin-doza ny faritra Dongbei, sa tsy izany?
Maro ireo fanehoan-kevitra tsikera nanome tsiny ny governemanta noho ny krizy nokleary:
Mba hisorohana ny fanafihana balafomanga nokleary an'i Korea Avaratra, manana Farovana Avo (Terminal High Altitude Area Defense-THAAD), MIM-104 Patriot sy Sambo Mpitatitra Fiaramanidina i Korea Atsimo sy i Japana; Taiwan kosa manana Rafitra Fampandrenesana Tabanjotran-davitra (Phased Array), i Rosia manana rafitra radar Voronezh-M ho fepetra fisorohana. I Shina no hany firenena izay tsy afaka mamantatra mazava sy manohitra ny balafomanga an'i Korea Avaratra. Ankehitriny noho ny fandrahonana amin'ny baomba-H, miankina amin'ny gazety izay mampianatra ny olona momba ny hevitra mahazatra mikasika ny taratra no hany azon'ny olona ao Jilin atao. Aiza daholo ny nalehan'ireo tanora tia tanindrazana izay nanohitra ny THAAD tamin'ny alalan'ny fanitsahana ireo fiara Koreana? Tsy tokony hitsangana lohan-daharana ve ianareo?
Satria manohana mangingina an'i Korea Avaratra ny governemanta manana toetra Shinoa [governemanta Shina], nahazo ny fitaovam-piadiany nokleary ihany ny firenena. Ankehitriny, manohintohina ny fiarovana ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao izany. Noho izany, ny governemanta manana endrika Shinoa dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny voka-dratsy rehetra ateraky ny krizy nokleary Korea Avaratra.